BUUGAAGTA MANHAJKA OO BILAASH LOOGU QAYBIYEY ARDAYDA DUGSIYADA – Somali Schools
Iyadoo la fulinayo ballanqaadkii Madaxweynaha Somaliland ku dhawaaqay, ardey kasta oo dugsiyada hoose/dhexe ee ay dowladu maamusho wax ka barta ayaa la qorsheeyey inuu helo buugaag bilaash ah oo manhajka waxbarashada Somaliland ah. Qorshahan ay dowladu waddo waxaa kor loogu qaadayaa tayada waxbarashada dugsiyada dawliga ah oo ka hooseysa kuwa gaarka loo leeyahay.
Lix kun [6,000] oo ardey oo wax ka barta toban  dugsi oo ku yaala gobolka Maroodi-jeex ayaa buugaagta la siiyay iyadoo ah todobaadkii u horeeyay ee qeybintu socoto. Ardey kasta waxaa la siinayaa sideed  buug oo daabacan uu casharada ka barto.
Buugaagta la bixinayaa waxaa ay ka kooban yihiin maadadaha Ingiriisida, Carabiga, Soomaaliga, Xisaabta, Sayniska, Cilmiga Bulshada, Taariikhda iyo Barashada Diinta.
Catooshe Maxamed Cige ayaa wuxuu ka mid yahay 1,200 oo ardey oo qaatay buugta ay wax ka bartaan. Wuxuu fasalka lixaad ka dhigtaa dugsiga Naasa-hablood ee magaalada Hargeysa.
Raadiyo Ergo ayuu u sheegay in buugta la siiyay ay kor u qaadayso in uu fursad u helo akhriska guriga. Wuxuu xusay in xog badan oo la xidhiidha casharada uu ka helayo.
“Waxaan haystaa buug igu filan, hadda waxaan fahmayaa dhamaan casharada oo dhan si aan uga jawaabo su’aalaha, sidoo kale waxay naga caawinaysaa inaan si fiican casharadii ula qabsano”ayuu yidhi Catooshe.
Maxamuud Jaamac Amaan, Maamulaha Dugsiga Naasa-hablood, ayaa soo dhaweeyay qorshahan kor loogu qaadayo tayada aqoonta lagu dhigo dugsiyada dowliga ah.
“Macalimiintii markii hore waxay u diyaarin jireen casharada, qoraal ayay wakhti badan kaga qaadan jirtay intay sabuurada ku qorayaan, fursada sharaxaad way yarayd, hadda wakhti ku filan ayay helayaan macalinkuna wuxuu helayaa wakhti ku filan oo casharada uu ku sharxo maaddaama ardey kasta buugtii haysto”ayuu yidhi Maxamuud.
Maxamed Daahir Axmed, Wasiir ku xigeenka Wasaarada Waxbarashada Somaliland, ayaa sheegay in ay hindisahan u sameeyeen si kor loogu qaado tayada waxbarashada dugsiyada ay maamulaan.
“Dugsiyadu ma awoodaan inay iibsadaan buugta, wakhti badan ayaa ka galayay dhigida casharada, waalidkuna ma haystaan lacag ay ku iibiyaan buugta si waxbarashada loogu dhigo cashuurta”ayuu yidhi Maxamed Daahir.
160,000 oo ardey ayay wasaaradu u qeybinaysaa 1,000 dugsi oo ku yaala dhamaan deegaanada Somaliland.
“Waxaanu diyaarinay in aanu dhameyno dhamaan qeybinta buugta wakhti yar oo kooban sida ugu fudud. Dhamaan dugsiyada dawlada waxay heli doonaan buug ku filan, wasaaraddana waxaa ka go’an inay kor u qaado tayada waxbarashada lagu bixiyo dugsiyada ay maamusho”ayuu sheegay Wasiir ku xigeenku.
Waa markii u horeysay ee buug loo qeybiyo ardeyda wax ka dhigta dugsiyada dawlada si kor loogu aqoonta ay dhigtaan oo hooseysa awgeed.